Fankahalàna ny Finoana Silamo – Angano Sa Zavamisy Marina? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Desambra 2017 7:40 GMT
Manoratra i Kenan Malik:
Folo taona lasa izay, tsy nisy na iray aza naheno ny fankahalàna ny finoana Silamo. Ankehitriny, ny rehetra avy amin'ireo Silamo mpitarika, ireo mpikatroka mafana fo manohitra ny fanavakavaham-bolonkoditra, hatramin'ireo ministra ao anaty governemanta dia te handresy lahatra fatratra antsika fa tabajoboka anatinà fankahalàna diso tafahoatra ny finoana Silamo i Angletera – fankahalàna izay, araka ny voalazan-dry zareo, dia mitondra amin'ny herisetra anaty rafitra, ny herisetra ara-batana, ny fanavakavahana ara-piarahamonina ary ny fahaverezan'ny maha izy azy ara-pôlitika.
Inona indray ary no atao hoe fankahalàna ny finoana Silamo? Na teo aza ny fanoherana avy amin'ireo Tandrefana sasany, ambaran'i Stephen Schwartz, mpanao gazety, fa misy ny fankahalàna ny finoana Silamo; tsy angano izy io. Ny atao hoe fankahalàna ny finoana Silamo dia:
• ny famelezana ny finoana Silamo iray manontolo ho olana ho anizao tontolo izao;
• ny fiampangàna ny finoana Silamo sy ny tantarany rehetra ho mahery fihetsika;
• ny fandàvana ny zavamisy ankehitriny, amin'izao vanimpotoana izao, dia ny fahamaroana an'isa ny Silamo;
• ny fanindriana mafy ny mba haneken'ireo Silamo ny fangatahan'ny tsy Silamo (miorina amin'ny tsy fahalalàna sy ny fieboeboana) mikasika ireo fanovàna teolojika maro, eo amin'ny finoan'izy ireo;
• ny fandraisana ireo fifanolanana rehetra ahitàna Silamo (isan'izany, ohatra, ilay nitranga tao Herzégovine, Bosnia am-polo taonany lasa izay), ho toy ny hadisoan'ny Silamo hatrany;
• ny fihantsiana ady amin'ny Silamo iray manontolo.
(famaritana misimisy kokoa)
Ity tahotra tafahoatra ity dia avy amin'ny tsy fahampian'ny fahalalàna ny kolontsaina Silamo sy ny fampiarahana foana ny fampihorohoroana amin'ny finoana Silamo sy ny fomba amam-panaony raha tokony ny pôlitika Silamo fotsiny no voakiana.
Manindry ihany koa i Stephen fa tafalatsaka anatin'ny fomba fanasokajiany manokana ny vondrona Wahhabi any Etazonia, izay mametraka ireo mpanohitra rehetra ny Silamo hiringiriny ho “mpankahàla ny finoana Silamo”. Ambonin'izany, matetika dia ahitàna petaka anarana ho an'ireo mpanakiana ilay fiampangàna, toy ny: Jiosy, Zionista, ary mpiasa Isiraelianina.
Misy ihany koa ireo vohikala mifanohitra toy ny Jihad Watch sy ny Islamophobia Watch izay vao maika mandrehitra ny resabe.
Niaiky ny Firenena Mikambana fa olana tsy mitsaha-mitombo ny fankahalàna ny finoana Silamo ary nikarakara famelabelarankevitra mitondra ny lohateny hoe “Miatrika ny Fankahalàna ny Finoana Silamo: Fanabeazana ho an'ny Fandeferana sy ny Fifankahazoana” tamin'ny faraparan'ny taona lasa.
Araka ny vohikala ‘No to Political Islam’ (Tsia ho an'ny Pôlitika Silamo) dia:
Maro amin'ireo mpomba ny Pôlitika Silamo no mitaraina fa ny fanakianana be fahatany ny fisehon'ny fomba amam-panao Silamo dia fiampangàn-tena ho mpanavakava-bolonkoditra sy mpankahala ny finoana Silamo. Kanefa maro amin'ireo fanakianana no tsy manohitra mivantana ny Silamo tenany fa ny Pôlitika Silamo fotsiny. Ary avy amin'ireo Silamo ihany no miainga ny ankamaroan'ireny fanakianana ireny. Amin'ny fomba ahoana no maha fanavakaham-bolonkoditra izany? Ary amin'ny fomba ahoana koa no maha fankahalàna ny finoana Silamo izany?
Tena zava-dehibe tokoa ny manavaka ny fanakianana ny Pôlitika Silamo sy ny tahotra ny Silamo na ny tahotra tsotra fotsiny, ny fankahalàna na ny fanaovana tsinontsinona ireo Silamo tsotra, izay mizaka ny vokatry ny Pôlitika Silamo ihany koa.
Noho izany, manana endrika roa ny loza mety hateraky ny ‘fankahalàna ny finoana Silamo’. Iray amin'izany ny fankahalàna manjavozavo sy tsy am-piheverana ireo Silamo tsotra izay mety hiteraka toejavatra tahaka izao, ary etsy andaniny ireo mpomba ny Pôlitika Silamo izay tsy te hahare fanakianana mikasika ireo fomba amam-panao Silamo na dia iray akory aza ka manasokajy izany ho ‘mankahala ny finoana Silamo’.
Vao mainka tsara raha takatsika mialoha ny tena fototry ny olana.